Ku soo dhawow qori line kasta oo ka tago aad sumadda hoos guestbook ah.
Guestbook ka yar yahay tirakoobka dadka booqda bogagga ugu-booqday degmada ee Holm ah. Si kastaba ha ahaatee, waa sidoo kale marar badan qof qoray wax. codkana!
Leave Salaan ama odhan waxa aad u malaynayso oo ku saabsan wax aad maskaxda ku haysaa!
0 fikirrada on "guestbook”
Gun Lundgren on 12 June, 2016 at 13:51 ayaa sheegay in:
Sida dhashay hoy Holmbo Östbyn ilaa dugsi bilaabay, Waxaan dareemayaa kulul Holm. Weli saaxiibo iyo kuway isbarteen tuulada iyo dareemeysaa guriga markii aan halkaas ka heli. Salaan ka Gun.
Mucaaradka Rockabilly Sundsvall on 30 Laga yaabaa, 2015 at 19:26 ayaa sheegay in:
hi. Holmbygden. Just doonayaan in ay xoogga saaraan in midsommar Kulan ma dhici doonto sannadkan. Waxaa wax laga xumaado laga yaabaa in u muuqdaan in ay haa tahay. Laakiinse markii kuwa waa in la wadida wax la smear, Oo xataa jiifsan ku saabsan wax, Bet Ord.vakter, niyadda, iwm. Markaas ha naga halkii midsommar kulan ka qayb Mucaaradka Graven..Rockabilly .
Ma marna loogu talo galay in ay khiyaamo / afuufaan .Därmed kasta waxaan mahad annaga iyo rajaynaynaa in aad ka heli kartaa wax kale degmadan in laga yaabo in ka khayr badan waxa aan isku dayayeen in ay ka shaqeeyaan
Kind o salaan Honest
Mucaaradka ROCKABILLY Sundsvall
Waxaan sidoo kale u mahad naqayaa, waayo, 2 Seasons in ay ahaayeen .
Holmbygden.se on 2 June, 2015 at 23:22 ayaa sheegay in:
alla Hej Rockabilly Mucaaradka,
Waxa ay ahayd ka our urur aad u caajis (!) si aad u maqasho waxa ku saabsan in uu yahay xoogaa midsommar kulan ku Holm. Sad inay maqlaan sheekadaada. Haddii kale, waxaa la mid aad u mahad iniative la heshiis oo xiiso leh oo dhan booqanaya baadiyaha.
Thanks for shaqada aad hoos u dhigay oo dhan!
Horumarinta Degmada ee Holm
Lina Näslund on 15 April, 2015 at 18:14 ayaa sheegay in:
hi! Waxaan ku noolahay halkaan tuulada ku meel gaar ah iyo manufactures dahabka
Iyo in yar oo kale qof kasta huh xiiseyn lahaa inuu dalxiis? Qof kasta oo la ogaado
Mid kasta oo ka mid ah tusaale ahaan habeen qaban? Daacadnimo Lina superlina84@hotmail.com
Sören Olofsson on 14 December, 2013 at 12:36 ayaa sheegay in:
Thanks for info oo dhan ka Holm!
Holmbygden.se on 16 December, 2013 at 10:01 ayaa sheegay in:
Aad funny inaan maqlo in long-distance guests mahad iyo booqo goobta!
#ShepherdsHut, iyada oo loo marayo
Karl Blomberg on 26 April, 2012 at 08:30 ayaa sheegay in:
Hambalyo website weyn!
Haddaba waa inaad sidoo kale xayaysiiya URL ah, tusaale ahaan, by calaamadaha dhamaan goobaha laga soo galo degmada Holm.
Holmbygden.se on 26 April, 2012 at 14:35 ayaa sheegay in:
Haa, fikrad ayaa noo soo dhuftay. Ilaa hadda, si kastaba ha ahaatee, nooc ma wax ka dhigay – shaqo ayaa sidoo kale laga sameeyo qof… Waxaan ku faraxsanahay ilaa caawiya oo dhan si ay u suuq nafteena, maxaa yeelay, ilaa hadda waxaa lagu faafin oo kaliya iyada oo lahjadeed mucayan ah oo internet-ka ee guud.
Thanks for jeedinaya!
Peter Lindeberg ee Skåne on 6 February, 2012 at 11:45 ayaa sheegay in:
Waxa ay ahayd weyn si aad u hesho email ugu Ulla Lindenberg on site Internet cusub degmada Holm. Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan qoraal afkoda ii haddii kale ka Wadaadka Carl-Heinrich Smuzzler (raalli higaadda) markuu fastidiously xarfaha iyadoo qiimaha facile bilaabay “Nix PIX” iyo “Costa Free”. Caleemaha The ahaayeen kuwo aad u fiican oo ku saabsan ka akhriso degmada oo dhan. Sidaa darteed, waxaan ku hanweynahay inaan, kuwaas oo qaar badan oo noocyada kala duwan ee mails.
Thanks for site weyn inaan ku biiro haatan la macaamiishu.
Peter ka Vikholms i Anundgård shukaansi
Roland Hultman on 12 January, 2012 at 08:56 ayaa sheegay in:
Had iyo jeer xiiso leh in uu akhriyo oo ku saabsan waxa ka dhacaya sida nasasho ah akhriska oo kaliya oo ku saabsan waxa ka dhacaya meelaha dhexe ka mid ah degmada ee ku hareereysan aan degdeg ah.
Bogaadin inaad yaa maamula noo jira kuwaas oo xiisaynaya, rajadii aad hesho gargaarka loo baahan yahay in this dhammayn.
degmada Holm waa meesha ugu fiican ee aan ku jiray intii aan ka badan 60 – nolosha sano ilaa hadda oo ay u badan tahay sii ahaan doonto….
Niklas on 30 November, 2011 at 18:41 ayaa sheegay in:
HBU Thanks for shaqada aad hoos noo halkan baadiyaha oo dhan! =)
#31 jirrabaya feature guestbook cusub =)
Risk för kö pga beläggningsarbete. Trafiken ... Akhri wax dheeraad ah